Qaphela: ndingazi Njani abantu? Kuhlangana abantu xa ufuna ukuphepha kongquzulwano ezinzima budlelwane nabanye - baggage ibango kunye Natalie Lew - IVIDIYO INCOKO zwelonke! Onke amazwe, iinqwelo, lonke ihlabathi.
Qaphela: ndingazi Njani abantu? Kuhlangana abantu xa ufuna ukuphepha kongquzulwano ezinzima budlelwane nabanye - baggage ibango kunye Natalie Lew
NML uthi:"ingxaki kukuba kufuneka ungquzulwano
Lately, andiqinisekanga apho jonga kuba abantu, ngenxa yokuba ndiza ukudinwa ka-uncwadiGuys ngaphandle apho kuphela ufuna ngobunye ubusuku kumi kwaye ixesha elininzi nisolko ngoko ke antonio ukuba ke ayisosine elihle, ndifuna ngaphezulu, mhlawumbi hayi ezinzima budlelwane, kodwa a guy uyakwazi umhla ngamanye amaxesha kwaye wonwabe kunye andikho mdala ngokwaneleyo ukuba banqule a Dating site kwaye andikho kuphela ngenxa yokuba mna akunayo boyfriend kunjalo ngoku. Bathi ufuna ukuya kuhlangana guys, nisolko hayi nje uzama ukufumana yakho panties, kodwa ufuna kwakhona musa ufuna a ezinzima budlelwane, kwaye namanani kukuba ingaba umntu uyakwazi umhla kwaye ukuchitha kwiintsuku ezimbalwa kunye. Ekuqalekeni, ufuna kuye ku-kuziphatha ngathi umntu olilungu fun, kodwa hayi kakhulu fun. Yiyo kulwa nawe ngenxa yokuba ufuna kakhulu kakhulu into kuwe pretend ukuba ufuna, into ngaphezu kwemihla emibini. Dating ngu nzima, kodwa ke, nkqu harder ngenxa yokuba kukho ngoko ke, abantu abaninzi abathi andazi yintoni ofuna, kwaye baya ukuba devastated.
Oku ithumela mixed imiyalezo kwaye yongeza nkqu ngakumbi abantu abaninzi abathi bahamba jikelele njenge headless aso kwi-Dating ihlabathi.
Oku oninika ithuba kuhlangana umntu kwaye uyakwazi gqiba ukuba kukho into ofuna ukuthatha elandelayo inqanaba. Akukho umthetho ukuba uthi awunokwazi umhla ngaphandle kokuba ufuna umhla into ezinzima, nangona kunjalo, utshintsho uhlobo Dating une.
Kanjalo, wena accidentally kukhokela abanye guys phantsi igadi indlela xa awuyazi into ofuna.
Olandelayo nto uyazazi yena thinks ukuba ufuna ngokwenene njengaye kwaye ufuna into ethile, ngenxa yokuba yenze emva kwemihla emibini.
Ukuba lowo ajongise jikelele kwaye uthi ukuba yena ufuna kuthatyathwa, uya kuba eziliqela imihla kwaye uya wonwabe, uya siphathe kwabo ngokufanelekileyo. Ukuba semi-decent umntu, uya kwenza nje ukuba, kodwa i-nokuqheleka umntu othe uyayiva umfazi uthi yena nje ifuna ukuba uyonwabele, uya mamela kuwe njengoko ixesha elide njengokuba ufunda fuck kuba omnye kwaye kunika esandleni sakho nethuba. Inxalenye kum uziva ngathi usasebenzisa, nkqu ukuba ke annoying, xa uphinda-k ubonakala ngathi ukuba ufuna ukwazi umbala wakho underwear ngaphezu ufuna, uyayazi, ukuba onke ufuna ufumana amashumi kwaye abanye Dating, aba ngabo mhlawumbi zakho zilungile candidates. Isixa-mali umsebenzi ukuba uza kufumana abantu kufuneka iliza elingunxantathu ukuba uhlobo Dating ufuna. Ukuba bonke ufuna ukuba ingaba ngu wonwabe, yiya kwi imihla, mna wouldn ukuba baguqukele isixeko phantsi phezulu ikhangela enokwenzeka suitors. Ndinga jonga yakho chances kunye guys uyayazi kulo mbutho. Kodwa kufuneka yenze isigqibo into ofuna. Ukuba ufuna musa ufuna ukuthatha into kakhulu seriously, kulungile. Ndihamba ngaphandle ngomhla street, uyonwabele kwaye mazibe yakho lokugada, kweyodwa kubekho inkqubela kwisixeko ukuze wonwabe kwaye uphephe into ezinzima, enye kubekho inkqubela kwisixeko avoiding izibophelelo. Oku kwenzeka lonke ixesha, kwaye ungabona ukuba bangene engalunganga uthando imikhuba ukuba wena musa unakekele njani ukulawula yakho omnye ubomi kwaye kangakanani uvumela ngokwakho ukuba abe attracted okanye influenced yi-guys kufuneka ahlangane.
Indawo ayi rhoqo a kubonisa ntoni uhlobo umntu kufuneka futhi ke kuhlangana, kodwa ngokubanzi, ukuba wena musa na uhlobo umntu ufuna anayithathela mvanje kwi iindawo sihamba, tshintsha iindawo.
Uphephe uzama ukuhlangabezana abantu emsebenzini, njengoko ndiya kuba ngokwaneleyo amava besebenza ngokwam nabanye abafundi ukuba andazi ukubhala ngokuthe ngqo kwabo ekhaya. Isantya Dating kwaye icacile mpawu fun kwaye unako kukunika ekhawulezayo ulungise kwi-indoda efuna ingqwalasela. Lumka, cinga ngendlela ubushushu kunye nabo kangangoko unako, umenze kakhulu demanding kwaye okanye ukufumana hooked kwi attracting ingqalelo. Intlanganiso abantu malunga babo imisebenzi nezinto endinomdla kuzo soloko okulungileyo ngenxa yokuba sele unayo ngokufanayo emhlabeni, kodwa ke nangakumbi kubalulekile ukuba ukhe ubene ikhangela a enokwenzeka iqabane lakho.
Abantu bamele iselwa oonombumba
Unguye galleries, scavengername hunts, iwayini tastings, ngokuhlwa iklasi, high school (nangona wena khumbula izakuba awkward emva koko), hardware evenkileni (jonga helpless, kunye chainsaw okanye into ethile kwi-hallway apho ezininzi abantu ingaba uyasebenza jikelele), ukuboleka a dog ukuba akunyanzelekanga omnye, kwaye thatha wahamba kuzo Park okanye ukwenza ezinye emidlalo.
Andikho omkhulu fan ka-intanethi Dating, nokuba ubudala, ngenxa yokuba kukho ngaphezulu liars kwaye amadoda pretend ukuba abe kuphela okkt xa ngaba ngokwenene kuba girlfriend okanye umfazi, ngoko ke akunyanzelekanga ukuba fumana ngokwam ezikhokelela kuwe ngendlela ilungelo icala icala.
Olugqibeleleyo kuba usebenzisa ezi sangokuhlwa amaqhekeza aye, ukutya okulungileyo, iwayini, kwaye iqela labantu abathi mhlawumbi freeze neqabane lakho personality. Kodwa icebiso lam kuwe yindlela yokufumana phandle ukuba ngubani ofuna. Kufuneka lungelelanisa yakho okulindelweyo ngokunjalo, ngenxa yokuba ukuba ngubani ofuna ngu fun, ngoko ke ukucinga into ezi guys ndifuna ukusuka kwi nani yi inkunkuma amandla. Nje ngenxa a guy ufuna ukuchitha ngobunye ubusuku akuthethi ukuba zithetha ukuthini ke yena ke get kuyo. Kuphuma, uyonwabele kwaye lumka, silindele abantu kuziphatha njenge enokwenzeka abahlobo xa ufaka engathndwayo ukusa kwi ngowesithathu umhla. Mna uyakwazi ukubona apho umbhali isuka. Ngesiqhelo xa yena ubuyisela njengokuba imfundo, yena akakwazi ufuna ukuchitha mgqibelo busuku kuphela ekhaya, kwaye kanjalo ufuna kuba abanye loluntu ndibano, kwaye idla yakhe iindawo ingaba ngathi uncwadi. Ke yenza okulungileyo umculo kwaye imisela kulungile, kodwa ndicinga ukuba imfihlelo asikuko ukuba silindele ukufumana yakho olugqibeleleyo iqabane lakho apho, kodwa nje relax, uyonwabele kunye abahlobo bakho, kwaye ukuba niya kuhlangana umntu umdla, kulungile, ngu-a ibhonasi.
Wam amava, mna ngxi kufuneka ahlangane umntu ngubani ngokwenene omkhulu, kodwa ndiya kuba abahlobo bakho abathe umlingane wakho ngalo ukutya kwaye umculo ingxelo.
Oku kubaluleke kakhulu umdla isihloko.
Ndicinga ukuba inani esinye isizathu, kuya kuba nzima kuba nathi ukuba umhla okulungileyo guys okanye nkqu ngaphantsi kwi yokuqala umhla kukuba sifanele ukuchitha kakhulu kakhulu ixesha ingqalelo kuyo.
Kuvakala ngathi desperation, kwaye abantu banako evakalayo kwi imayile kude. Kukangakanani esiyivayo stories malunga abantu abakufutshane ikhangela omkhulu partners, ukuba ukhe ubene nkqu ilindele ngayo? Abaninzi couples beza kunye xa sukuba wafunga susa opposite sex. Ndiyacinga ukuba eyona nto ukwenza xa nisolko kuphela kukuba kugxila ngokwakho. Ukufumana phandle kutheni yakho yokugqibela budlelwane ayiphumelelanga kwaye yintoni ungakwazi ukufunda ukususela oko. Hamba kwaye uyakuthanda enza ntoni kuwe ndonwabe. Kwaye kuba kanye, bonwabele into usebenzisa lonely. Ndicinga kuba watshata kakhulu ngaphezulu kweentsuku kunokuba omnye, ngoko ke singadibanisa bonwabele kwayo ngexesha sinako. Njengoko kuba Dating, boys, kodwa ndiza kuthetha ukuba kufuneka wazi ntoni qualities osikhangelayo kwi-indoda njengoko Jikelele phambili. Andithethi ngokushumayela a enkulu uluhlu, kodwa ndizama ukucinga izinto zikakesare absolutely non-negotiable. Ngale ndlela, uyayazi into osikhangelayo kwaye unako umhla kakhulu ngakumbi ezilungele abantu kuba kuni. Kanjalo ikuvumela ukuba kugxila apho umntu uza kuba nabafana Yakho namanani iqabane lakho. Ngoko ke, umzekelo, ukuba ufuna umhla umntu othe waziva loyal, nomonde, kwaye uhlobo, ngoko ke kuya kufuneka kugxininisa ngakumbi kwi ngokwakho. Kulungile, ndine umbuzo. Mna akusebenzi khange na apho okanye oko bekuya involve, kodwa nangona kunjalo ekubeni oku omkhulu guy ngubani nje ngothando kunye nam, uyabathanda abantwana bam, ndiya kwenza nantoni na kum. Yena u-a TOLLER guy, wenze kakuhle, fun, eyobuhlobo, enkulu usapho, umntu, sino ngayo ngoluhlobo iyonwabisa ukuba wayeza kuba olugqibeleleyo iqabane lakho, imodeli, kwaye umyeni, kodwa yena ke kancinci overweight, kwaye andiqinisekanga ukuba ndinako ukutsala kuye sexually. Mna hate ukuthi ke leyo, ngenxa yokuba mna bazive ngathi mna belong wakhe apartment, kodwa makhe ubuso ke, uninzi abafazi ufuna ukuba abe attracted kuye kwindawo yokuqala. Mna anayithathela ebhalwe ezingachanekanga guys bonke ubomi bam, kwaye ndiya kuba abantwana kuba ezingachanekanga guys.
Akunyanzelekanga ukuba ufuna ukuya kwi ohlala yedwa.
Ndinguye ngoku ilungu EUMM - kodwa uzama isigqibo sokuba yintoni ekufuneka uyenze.
Akunyanzelekanga ukuba ufuna kuba budlelwane ne boyfriend yam kunjalo ngoku, kodwa ndiyazi ukuba mna ngonaphakade ufuna ukuba, mna ndingafikela ngokwam. Mna nje ufuna ukwazi ukuba nabani na thinks ngabo ngakumbi attracted ukuba umntu ngenxa abo bamele, ngokuhamba kwexesha. Mna anayithathela sele bemangalisiwe ixesha elide ukuba thina uphumelele khange khangela ngamnye enye rhoqo, ngoko ke ndimangazekile ukuba kuya kuba yonke imihla ukuba izinto azifani, kodwa hayi njengoko uqinisekile. I-physical utsalekoname sisipho Barker. Enkosi, enkosi mentioning oku kwi - kwindlela yakho hetalia, oko kusenokuba nzima ukufumana apho, kodwa intlanganiso abantu kwaye ukuphakanyiswa kokuya kwiintlanganiso ekugqibeleni imisebenzi. Kufuneka nje ube ukugcina uzama.
Deshad ingingqi-A ezinzima budlelwane.
Να Κλείσετε ένα Ραντεβού χωρίς
ividiyo Dating kunye kubekho inkqubela ngaphandle ubhaliso familiarity elinefoto kwaye ividiyo ividiyo Dating-intanethi akukho ubhaliso qinisekisa Chatroulette ngaphandle ads esisicwangciso-mibuzo roulette ubhaliso Dating kunye ifowuni amanani ividiyo ukuncokola nge-girls ubhaliso kuhlangana watshata kuhlangana phezulu kuba omnye-ixesha